Akanakira Anonyaradza Ehupfumi King size Hati Matress Supporter | Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China. Zvigadzirwa zvikuru Zvakanakisa Anonyaradza Ehupfumi King size Hotel Matress Supporter.
Inonyaradza Ehupfumi King size Hotari Matress Chigadzirwa chiri kudiwa zvakanyanya pakati pehupenyu hwevanhu kana basa. Iyo yakashandiswa zvakanyanya pekugara, yekutengeserana uye maindasitiri.
Rayson inogadzirwa pasi pehunyanzvi hwekugadzira tekinoroji. Yakagadzirwa uchishandisa CAD, yakagadzirwa ne CNC tekinoroji, uye inodzorwa ne sensor technology. Inonyaradza Ehupfumi King size Hati Mattress
1.Ko iwe kutengesa kambani kana fekitori?
Isu tiri fekitori, tinorongedza kugadzira maturu, isina machira akarukwa uye matsime kweanopfuura makore gumi.at panguva imwe chete iyoyo, isu tine nyanzvi yekutengesa timu yekubata nebhizimusi renyika.
2.Can iwe unondibatsira kugadzira yedu yekugadzira kana kushandisa logo yangu pachigadzirwa?
Isu tinogona kuita mattress zvichienderana nekugadzira kwako kana kupa OEM sevhisi inongoda kuti utipe chako chigadzirwa artwork kana logo mifananidzo.
3.Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
LC pakuona / neTT, 30% Deposi uye 70% chiyero chiri kupesana nemakopi eanotumira magwaro echiremba 7 mazuva ekushanda.
1.Maybe zvakasiyana zvishoma kubva pane zvaunonyatsoda. Muchokwadi, mamwe paramende senge poda, dhizaini, kukwirira uye saizi inogona kushongedzwa.
2.Maybe iwe wakavhiringidzika pamusoro pekuti ndeipi inogona kuve yakanyanya-kutengesa chitubu mattress. Zvakanaka, nekuda kwemaitiro emakore gumi, isu tichakupa iwe imwe nyanzvi yekupa zano.
3.Our yakakosha kukosha ndeyekubatsira iwe kuti ugadzire imwe purofiti.
Rayson Global Co, Ltd mubatanidzwa weSino-US, iyo yakagadzwa muna 2007 iyo iri muShishan Town, Foshan High-Tech Zone, uye yakarongedzwa pedyo nemabhizinesi ane mukurumbira akadai seVolkswagen, Honda Auto uye Chimei Innolux.The fekitori dzinenge makumi mana maminetsi nemotokari kubva kuGuangzhou Baiyun International Airport uye Canton Fair Exhibition Hall.